warkii.com » Magacyada LIX Ciyaartoy Oo Muhiim Ah Oo Leicester Ka Maqan Kulanka Manchester United
Magacyada LIX Ciyaartoy Oo Muhiim Ah Oo Leicester Ka Maqan Kulanka Manchester United
Tababaraha Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa xaqiijiyey in Marc Albrighton uu yahay ciyaartoyga kaliya ee kasoo laabtay dhaawac ee taamka u ah kulanka Manchester United ee Axadda, isla markaana xiddigihii kale ee hore u maqnaa aanay fursad u haysan inay ciyaartan kasoo gaadhaan.
Manchester United ayaa u safraysa garoonka King Power Stadium, waxaana halkaa kusoo dhoweynaysa Leicester City oo ay ciddiyaha ku dagaallami doonaan maadaama midkooda guuleysta uu iska xaadirin doono tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe.
Foxes waxa kaliya oo ay wax ku leedahay inay ciyaartan badiso, laakiin Red Devils ayaa afar ugu sarreeya kaga mid noqon karaysa inay badiso ama barbarro gasho.
Brenden Rodgers ayaa shirkii Jaraa’id ee Jimcihii ee uu kaga hadlayay kulanka Manchester United ay ku qaabilayaan, waxa uu ku caddeeyey in kooxdiisu ay dhibaatooyin dhaawacyo ah ragaadiyeen, isla markaana ay lix ciyaartoy ka maqnaanayaan.
“Dhab ahaantii usbuuc wanaagsan ayaanu soo qaaday. Ciyaartoydu waxay nasteen maalmo yar oo ay ila tahay inaanu u baahnayn. Waxaanu usbuucaas samaynay tababar wanaagsan iyadoo ay noo ahayd markii ugu horreeyey ee aanu toddobaad fasax ahaano.” Ayuu yidhi Rodgers oo intaa raaciyey: “Ciyaartan waxaanu imanaynaa anagoo firfircoon iyo isla kooxdii oo diyaarsan.
“Albrighton wuu soo laabtay, tijaabo hubin taam ahaanshihiisa ah ayaana lagu samayn doonaa laakiin wuu kasoo noqday dhaawacii.”
Ciyaaryahannada dhaawaca kaga maqan Leicester City ayaa kala ah: James Maddison, Ben Chilwell , Christian Fuchs, Daniel Amartey iyo Ricardo Pereira halka Caglar Soyuncu oo tiir adag oo difaaca ah uu ganaax ku maqan yahay.